फक्स जीत | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
को मा शहर मा सबै भन्दा स्पस्ट बोल्नु् स्याल पूरा गर्न आफ्नो बेहोरा मा ब्रश slots site. Impeccably एक टक्स मा तैयार, श्री. Foxin यो पाहुना प्ले जीत5reel 25 payline मोबाइल र डेस्कटप स्लट खेल. एक व्यक्ति को धनी र विशिष्ट हावा Radiating (??) आदेश मा, उनी र उनको Pups आफ्नो उदारता र जीत तपाईंलाई lavish हुनेछ.
फक्स प्रतीक जीत
3 डी धनी, स्यालले मोबाइल थिम्ड र डेस्कटप स्लट कौशल र रचनात्मकता लागि केक लिन्छ. कसले धनी स्याल को सपना देख्यो होला र पिल्ले आफ्नो brood तपाईं प्रलोभनमा र अत्यन्तै आकर्षक जीत जीत सहयोगको हात उधारो हुनेछ? Exquisitely कार्य गर्ने पिल्ले बारेमा sneaking र रील मा प्ले संग एक शानदार रहन कोठा मा ठाँउ लिन्छ डिजाइन. धन को संकेत प्रदर्शन कार हो, सुन फव्वारे, mansions र सुन कार्ड प्रतीक छोट्याउन.
Wilds: सुन्दर मकान को मास्टर, श्री. फक्स यो क्रम ल्याउन गर्न रील देखिने, को प्रतीक को बाँकी स्थानापन्न द्वारा. यो कार्य पूरा, र तपाईं जित्न सक्छौं 2,000 उहाँलाई सहयोगको लागि एक बोनस रूपमा सिक्का.
Scatters: यो Foxin जीत खेल तपाईं खाली हाथ फर्कन चाहनुहुन्छ गर्दैन. जहाँसुकै रील मा गोल्ड प्रतीकको छरिएका पट खोज्न र सम्म जित्न सक्छौं 100 पटक wagered बाजी.
स्यालले हवेली को आफ्नो भ्रमण समाप्त, को ट्रिगरिङ द्वारा 10 निःशुल्क खेल र डबल आफ्नो जीत. बस खोज्न3वा भन्दा बढी3को रील मा गोल्ड प्रतीकको छरिएका पट को र तपाईं मुक्त spins खेल पुन: ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ. यो प्यारो पिल्ले यो रील मा खोल्दै र जङ्गली प्रतीक थपेर भरिएको थप रमाइलो बनाउन हुनेछ.
स्यालले Pups बस अझै पनि रहन सक्दैन र wilds मा उनलाई खोल्दै को रील मा पप अप हुनेछ. यो खेल आफ्नो हरकतों नियन्त्रण गर्न सम्भव छ सुपर बेट विशेषता. तपाईं मा एक पप समातेर सक्नुहुन्छ 3Rd तिर्ने द्वारा रील 25 coins. भुक्तानी 35 or 50 सिक्का र तिनीहरूलाई बारी हेर्न 2,3and4reels, वा सबै क्रमशः wilds मा रील.
तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत बढाउन सक्छ फक्स गरेको कोष एमआर को उदारता स्वीकारेर. फक्स जीत. उहाँले अनियमित आफ्नो ब्यालेन्स अप माथि हुनेछ. वा अरू उहाँले मिलाउ तपाईं leprechaun पाउन दिनु हुनेछ र राम्ररी र आफ्नो pockets खाली Leprechaun शेक तल सुविधा.
अर्को पैसा कताई लागि प्रतीक्षा सुविधा अझै छ. गैंबल र सही क्रमशः कार्ड रंग वा कार्ड सुट अनुमान द्वारा एक 2x वा 4x गुणक या त जीत.
यसको असाधारण 3D ग्राफिक लागि शीर्ष स्थान लिइरहेको, एनिमेसन र अद्वितीय विषय आफ्नो आनन्द भरिएको दृष्टिकोण, फक्स जीत को Jackpot हिट. यस धूर्त कस्तुरीको आतिथ्य आनन्द उठाउँछन् र घर प्रचण्ड जीत को जानेबेलामा उपहार ल्याउन.